Shir Khibrad Wadaag Ah Oo Ku Saabsan Xuska 20ka Ginboot - Cakaara News
Shir Khibrad Wadaag Ah Oo Ku Saabsan Xuska 20ka Ginboot
Jigjiga(cakaaranews)Sabti 13ka May 2017. Sida lawada ogyahay Bisha sagaalaad 20keeda tirsiga dalkeena ayaa ah maalin kuwayn dhamaan shacabwaynaha dalka itoobiya islamarkaana qiimo iyo qaayo gaar ah uleh dhamaan qoomiyadaha dalkeena iyadoo guud ahaana deegaanada dalku iyo 2 ismaamulba ay diyaargarawyo kaladuwan ugu jiraan. Waxaana maanta kadhacay hoolka shirarka video conferencega ee xafiiska adeega shacabka iyo horumarinta cududa shaqaalaha DDSI shir muuqaal arag ah oo kusaabsan diyaargarawga maalinka fooda inagu soohaysa ee 20ka ginboot kaasoo ay kasooqayb galeen masuuliyiinta heer deegaan, gudoomiyayaasha gobolada iyo waliba dhigooda deegaanada dalka iyo masuuliyiin heer federal ah.
Hadaba, shirkan oo ahaa mid lagu wada shirayay aalada muuqaal araga fog ee video conference ayaa ah mid heer dal iyo deegaanaduba ay kaga wada arrinsanayeen xuska munaasabada 20ka Ginboot. Oo ah maalinkii afka dhulka loodaray kaligii taliskii dhiig miiradka ahaa ee Dhergiga. Islamarkaana ay tahay maalikii lahelay systemka dawladnimo ee ay u dhanyihiin dhamaan shucuubaha iyo qoomiyadaha dalku.
Sikastaba ha ahaatee, shirkan ayaa ahaa khibrad wadaag ku qotoma xuska 20ka ginboot iyo waliba dood cilmiyeedyo ka hadlaya Horumarka, Nabadgalyada, iyo Maamulka suuban ee ay haystaan dhamaan shacabwaynaha dalka ioobiya ee ku kala nool 9ka dawlad deegaan iyo 2 ismaamul magaalo.